General Burhaan Oo Sheegay In Uusan Ka Mid Ahaan Doonin Dowladda Suudaan Ka Dib Kala-Guurka | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	General Burhaan Oo Sheegay In Uusan Ka Mid Ahaan Doonin Dowladda Suudaan Ka Dib Kala-Guurka
Taliyaha ciidamada Sudan General Abdel Fattah al-Burhaan ayaa sheegay in uusan ka qeyb qaadan doonin dowlad kasta oo timaada ka dib xilliga KMG ah, waxaana uu beeniyay in ciidamadu ay mas’uul ka yihiin dhimashada dibadbaxayaal ka soo horjeeda la wareegidda militariga.
“Waa ballan-qaadkii aan u qaadnay nafteena, dadka Suudaan iyo beesha caalamka – in ay naga go’an tahay dhamaystirka ku-meel-gaarka dimoqraadiga ah, qabashada doorashooyinka waqtigooda, oo ay naga go’an tahay in aan joojinno dhaqdhaqaaq kasta oo siyaasadeed,” al-Burhan ayaa u sheegay Al Jazeera.
“Waxaa naga go’an inaan xukunka ku wareejinno dowlad rayid ah oo karti qaran leh, waxaana ballan-qaadeynaa inaan ilaalinno kala-guurka isla markaana ka-hortagno wax kasta oo caqabad ku noqon kara,” ayuu sii raaciyay.
Mudaaharaadyada lagaga soo horjeedo afgambiga dalka ayaa dhacayay tan iyo 25-kii bishii Oktoobar ee bishii hore oo ay ciidamadu la wareegeen awoodda dalka, iyadoo mudaaharaadkana uu sababay dhimasho iyo dhaawac.
Ugu yaraan 14 qof oo mudaaharaadayaal ah ayaa la dilay waxaana ku dhaawacmay ilaa 300 oo qof, sida ay sheegeen golaha dhexe ee madaxa banaan ee Dhakhaatiirta Suudaan.
Al-Burhaan ayaa sidoo kale beeniyay in ciidanku ay mas’uul ka yihiin dhimashada dadka mudaaharaadayay.
“Ciidanka Suudaan ma dilaan muwaadiniinta, waxaana jira guddiyo baaritaan oo soo bandhiga waxa dhacay,” ayuu yidhi.
Burhan waxa uu sheegay in wadahadaladu ay u socdaan xisbiyada siyaasadda iyo shakhsiyaad uu ka mid yahay ra’iisul wasaarihii xilka laga tuuray Abdalla Hamdok oo ku saabsan in la gaaro heshiis lagu dhisayo dowlad.
Shalay ayay ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay dhowr isu soo bax oo looga soo horjeeday afgambiga, iyadoo dibadbaxayaal ka dhacay magaalooyin dhowr ah.
General Burhaan Oo Sheegay In Uusan Ka Mid Ahaan Doonin Dowladda Suudaan Ka Dib Kala-Guurka was last modified: November 8th, 2021 by Admin
Dhageyso:-Bishacas Soomaaliya laanteeda Beydhabo oo laga guuriyay gurigii dowladeed ay ka degned magaalada beydhabo.